Universe Fitness | Myanmar Online Shopping E-commerce Website for Beauty, Cosmetics, Skincare, and Makeup - mm.drecomebeauty.com
Universe Fitness | Ahlon
Universe Fitness ကို အမှတ် ၁၈၃ ပထမထပ် ဆင်မင်းလမ်းနှင့် ငုဝါလမ်းထောင့် အလုံမြို့ နယ် ရန်ကုန်မြို့  တွင်ဖွင့်လှစ်ထားရှိပါသည်။ အဆီကျလှပလိုသူအမျိုးသား၊ အမျိုးသမီးများသာမက၊ ခန္ဓာကိုယ်အလေးချိန်တက်လိုလှပပုံကျလိုသူတွေအတွက် ဈေးနှုန်းသက်သာစွာနဲ.နည်းပြများမှစနစ်တကျပြသပေးတဲ.အတွက် အမြန်ဆုံးသိသာလှပလာစေမယ်. Fitness Center တစ်ခုပဲဖြစ်ပါသည်။
ခေတ်မှီစက်ကိရိယာအစုံအလင် ၊ Aircon အပြည့်ဖြင့်ကျယ်ဝန်းသန့်ရှင်းသောအားကစားခန်းမ ၊ locker room ၊ shower room များသာမက changing room ပါထားရှိပေးထားပါသည်။ မန်ဘာကြေးမှာ တစ်လ ၁၅၀၀၀ ကျပ်သာ ကျသင့်မည်ဖြစ်ပြီး ၊ သုံးလစာသွင်းပါက ၄၀၀၀၀ ကျပ်ဖြစ်ပါသည်။ Fitness ဖွင့်ချိန်မှာ မနက် 6:00 နာရီမှ ည 8:00 နာရီအထိဖြစ်ပြီး တနင်္ဂနွေနေ့ ပိတ်ပါသည်။
No 183, 1st floor, Corner of Sinmin Street & Nguwar Street, Ahlon Township, Yangon
Universe Fitness is located at No 183, 1st floor, Corner of Sinmin Street & Nguwar Street, Ahlon Township, Yangon, daily from 06:00 AM to 8:00 PM, closed every Sunday.We recommend this gym to anyone who is serious about fitness, weight gain and who loves the camaraderie of great, friendly coaches who are able to get to know the people at the gym individually. Fully air-conditioning, tidy and wide room area, various gym equipment, lockers, shower room and changing room for good facilities. Member fees for one month is only 15000 kyats and three months for 40000 kyats per person.
LaDyy Boss Make-up Studio
AMARA Foot Therapy & Beauty Service
THE LUX FAMILY WELLNESS & FOOT REFLEXLOGY
Khit Thit Pann Hair & Skin Spa ( Ahlon )